ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိသားစု အားလုံးကို (၆)လအကြာမှာ သူမရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေကို ရင်ဖွင့် ပြောပြလာတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်….. – Shwe Naung
ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိသားစု အားလုံးကို (၆)လအကြာမှာ သူမရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေကို ရင်ဖွင့် ပြောပြလာတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်…..
N N | December 11, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ် ကြီးရေ ခွန်းဆင့်နေခြည်ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၆)လခန့် ကတော့ ခွန်းဆင့်နေခြည် ကသူရဲ့ မိသားစုဝင် တွေအားလုံးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး လက်ရှိမှာတော့ သူရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အခြေအနေအကြောင်းကို အခုလိုပဲသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ ရင်ဖွင့်ထားခဲ့ပါ တယ်။
“မိသားစု အားလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ကျွန်မစိတ်တွေ အဝီစိထိကျသွားခဲ့တယ်။စိတ်ကျ သွားတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့အချိန် တုန်းကကျွန်မဘက်စုံကျသွားခဲ့တယ်။ အခုကျွန်မ recover ပြန်ဖြစ်ပြီ အရင်က ထက်ပိုသန်မာလာတယ်
အခုကျွန်မ ပျော်အောင်ပြန် ကြိုးစားတာအောင်မြင်ခဲ့ပြီ တခါတလေ မိသားစုကို လွမ်းဆွတ်လို့ ကြေကွဲရပေမဲ့ ကျွန်မ မသေသ၍ ရှင်သန်ဖို့ လိုတယ် ဒါ့ကြောင့်ကျွန်မပျော်အောင် ပြန်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ် ဆိုတာကျွန်မသိ တယ်။
စိတ်ပျော် နေမှ အရာရာစွမ်းဆောင်နိုင် တာဆိုတော့ မပျော်ပျော်အောင်သာ ကြိုးစားပေတော့ ဘယ်လောက် ကြေကွဲ ပူဆွေးစရာ တွေရှိနေပါစေ ကိုယ်အသက်ရှင်နေသေးသ၍ ကိုယ်ပျော် အောင်နေမှ
ကိုယ့်ဘဝက ဆက်ရှင်သန်နိုင်မှာပါ။ ကြေကွဲစရာ ပူဆွေးစရာ တွေကို ရင်ဝယ် ပိုက်ပြီး အကြာကြီးခရီးဆက် နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်းရှင်ရက်နဲ့ သေနေသ လိုပါပဲ။
ဘဝကတိုတိုလေးပါ အရာအားလုံး ကခဏလေးတွေပါ။ လူသားအားလုံး သေမဲ့ရက် ကိုထိုင် စောင့်ရင်း လူဖြစ်ခွင့်ရနေတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်း ဘဝကို မပျော်လည်းပျော်အောင် သာဖြတ်သန်းကြပါ။
အရာအားလုံး အတွက် Fighting ” ဆိုပြီး အကောင်းဆုံး ရပ်တည် နေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း နဲ့ ပရိသတ် တွေလည်း ဘယ်လိုအဆိုတွေ ပဲကြုံတွေ့တွေ့အားတင်း ရင်ဆိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးရပ်တည်ဖို့ အကြံပြု ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
Source – Khunn Sint Nay Chi
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို‌လေး……….
နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ. ဆက်ဆီကျကျ ရေချိုးနေတဲ့ ပုံရိပ်များ…
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ ချီချီရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ယွန်းမီမီကျော်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရား‌လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ မေဘရဏီစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်‌လေးများ……..
အတွင်းသား အလှအပတွေ အထင်းသား ပေါ်အောင် ‌ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်အလန်းစားတွေ ပေးနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
ကိုယ်ကျပ် အင်္ကျီလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ရွှေရင်မွှာလေးတွေကို အထာကျကျ လှုပ်ပီး ကပြနေတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……..
ဖွေးဥနုနေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေကို အထင်းသား ပေါ်အောင် ချပြလိုက်တဲ့ ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….